Anoshamisa Thailand anopfugamira muwai: Iyo Rosewood Bangkok, iyo COVID yekufa muhotera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Anoshamisa Thailand anopfugamira muwai: Iyo Rosewood Bangkok, iyo COVID yekufa muhotera
Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo Rosewood Hotera Bangkok
rakanyorwa Andrew J. Wood - eTN Thailand
Iro rosewood parakavhurwa rakagadzirisa zvakare matenga eBangkok. Rosewood Bangkok ine nhurikidzwa makumi matatu, inoratidzika zvinoshamisa, yakatwasuka dhizaini yekuvaka. Chimiro chayo chemazuva ano chakafemerwa newai, inozivikanwa Thai chiratidzo chekukwazisa. Iyo yemazuva ano silhouette kuratidzira kwekugadzira kwemweya weThai. Yakapfuma Thai tsika inosimbiswazve neyemukati dhizaini zvinhu uye akajeka emvura maficha mukati meumbozha hotera iri mutero kuBangkok, guta rakavakirwa pamusoro pemvura.
Iyo yakasarudzika yakasarudzika 30-nhurikidzwa Rosewood Bangkok Hotera muBangkok, Thailand iri pakati pemabhizimusi ari kunetseka ekugamuchira vaeni zvakakanganiswa neyakaipisisa COVID-19.
Izvo zvinorambidzwa parwendo rwekunze zvakapotsa kuita chando kuyerera kwenzira dzevashanyi.
"Vashandi veRosewood vakaudzwa nezve chiziviso chekuvhara neChipiri," mumiriri wehotera akadaro, nehotera ichivhara Mugovera.
Mumiririri akataura nemamiriro ekusazivikanwa, uye hotera yakaramba kutaura zvimwe.
Ikavhurwa iyo Rosewood Bangkok yakati yaive yakagadzirirwa kumisikidza nyowani dhizaini dhizaini yeguta guru rehumambo nedanho repasirese. Zvino COVID-19 akazviuraya.
Rosewood Bangkok chirongwa chakasimudzwa chakagadzirwa neRende Development Co, Ltd. iri yemhuri yaThaksin Shinawatra, aimbova mutungamiriri weThailand.
"Kuvharwa kwechinguva kweRosewood Bangkok kunofanirwa kumisikidza nzvimbo pakati pekusagadzikana," Paetongtarn "Ing" Shinawatra, Mutevedzeri Mukuru weRende uye mwanasikana waThaksin, akanyora paFacebook.
Kuchengetedzwa kwevashandi vese vemuhotera nevashanyi kunoonekwa sekutanga, akadaro.
Vazhinji vanoona vanonetsekana kuti hotera inogona kutengeswa kana kuiswazve mazita zvichitevera kuvharwa kwacho.
Marisa Sukosol Nunphakdi, purezidhendi we Thai Mahara Sangano, yakadana hurumende kuti ibvumidze nzvimbo dzekudyira mumahotera kuvhurwa zvichiteerana nemutemo wekurerutsa zvirambidzo mumaresitorendi.
Nzvimbo dzekugwinyira, madziva ekushambira, nemakamuri emakamuri emahotera anofanirwawo kubvumidzwa nemimwe mirau, akadaro Marisa.
British Airways: Hapasisina madzimai nemachinda
Eustatius - Saba - Sint Maarten nyowani ...
Mukadzi weTanzania Kufamba Nyeredzi Anofara ari Kumusoro
Jamaica mahotera nemaindasitiri ekudyira anokura ne330.7%